Kooxda Duulimaadyada ee LATAM Hadda Waxay Gudbiyeen Qorshaha Dib-u-habaynta Cutubka 11aad
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Kooxda Duulimaadyada ee LATAM Hadda Waxay Gudbiyeen Qorshaha Dib-u-habaynta Cutubka 11aad
LATAM Airlines Group SA iyo xulafadeeda Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, iyo Maraykanka ayaa maanta ku dhawaaqay xeraynta Qorshaha Dib-u-habaynta ("Qorshaha"), kaas oo ka tarjumaya dariiqa hore ee kooxda si ay uga baxdo cutubka 11. iyadoo la raacayo sharciga Maraykanka iyo Chile labadaba. Qorshaha waxa weheliya Heshiiska Taageerada Dib-u-habaynta (RSA) ee Kooxda Waalidka Ad Hoc, oo ah kooxda ugu wayn ee dayn-bixiyayaasha aan la hubin ee cutubkan 11, iyo qaar ka mid ah saamilayda LATAM.
RSA waxay diiwaan gelisaa heshiiska u dhexeeya LATAM, kuwa aan soo sheegnay ee ka badan 70% ee sheegashooyinka aan la hubin ee waalidka iyo kuwa haysta ku dhawaad ​​48% ee 2024 iyo 2026 US Notes, iyo saamilayda qaarkood oo haysta in ka badan 50% ee sinnaanta guud, iyadoo ay ku xiran tahay fulinta dukumeenti qeexan ee dhinacyada iyo helitaanka ogolaanshaha shirkadda ee saamilaydaas. Sida ay hayaan hawsha oo dhan, dhammaan shirkadaha kooxdu waxay sii wadaan inay u shaqeeyaan sidii xaaladaha safarka iyo ogolaanshaha dalabka.
"Labadii sano ee la soo dhaafay waxaa lagu sifeeyay dhibaatooyin adduunka oo dhan ah - waxaan weynay saaxiibo iyo qoys, asxaabta iyo kuwa aan jecelnahay. Waxaana dib u soo cusboonaatay iyadoo duulista iyo socdaallada caalamiga ah lagu keenay is-taagid ay ku timid dhibaatadii ugu waynayd ee abid soo wajahda warshadeena. In kasta oo geeddi-socodkeenu aanu weli dhammaan, waxa aanu gaadhnay guul muhiim ah oo loo mari lahaa mustaqbal dhaqaale oo xooggan,” ayuu yidhi Roberto Alvo, oo ah madaxa fulinta ee shirkadda diyaaradaha ee LATAM Airlines Group SA. hab dhexdhexaadin adag si loo gaadho natiijadan, kaas oo siinaya tixgelin macno leh dhammaan daneeyayaasha iyo qaab-dhismeedka u hoggaansamaya sharciga Maraykanka iyo Chile labadaba. Soo gelitaankooda raasamaalka cusub ee ganacsigeena ayaa marag madoon u ah taageeradooda iyo aaminsanaanta rajadayada mustaqbalka fog. Waxaan u mahadcelineynaa kooxda gaarka ah ee LATAM ee ka soo kabsatay hubanti la'aanta labadii sano ee la soo dhaafay oo u suurtagelisay ganacsigeena inuu u sii shaqeeyo oo u adeego macaamiisheena sida ugu macquulsan."
Qorshuhu waxa uu soo jeedinayaa in kooxda lagu shubo $8.19 bilyan iyada oo loo marayo isku dhafka sinnaanta cusub, qoraalada la bedeli karo, iyo deynta, taas oo u sahlaysa kooxda in ay ka baxdo cutubka 11-aad iyada oo la adeegsanayo hanti-wadaag ku habboon si ay u dhaqangeliso qorshaheeda ganacsi. Marka ay soo baxdo, LATAM waxaa la filayaa in ay lahaato wadarta deynta ah ku dhawaad ​​$7.26 bilyan1 iyo dareere dhan $2.67 bilyan. Kooxdu waxay go'aamisay in tani ay tahay culeys deyn ah oo muxaafid ah iyo dareere ku habboon muddada hubin la'aanta duulista caalamiga ah oo ay si fiican u dhigi doonto kooxda horay u socota.
Gaar ahaan, Qorshuhu wuxuu qeexayaa in:
• Marka la xaqiijiyo Qorshaha, kooxdu waxay ku talo jirtaa inay bilawdo $800 milyan oo bixinta xuquuqda sinnaanta guud, oo u furan dhammaan saamilayda LATAM si waafaqsan xuquuqdooda ka-hortagga ah ee hoos imanaya sharciga Chile, oo ay si buuxda u joojiyeen dhinacyada ka qayb qaadanaya RSA, iyada oo ay ku xidhan tahay fulinta dukumeenti qeexan iyo, marka la eego saamilayda dib-u-joojinta, helitaanka oggolaanshaha shirkadda;
• Saddex qaybood oo kala duwan oo qoraalo ah oo la bedeli karo ayaa ay bixin doontaa LATAM, kuwaas oo dhamaantood si hordhac ah loo siin doono saamilayda LATAM. Ilaa xad aanay ku biirin saamilayda LATAM inta lagu guda jiro muddada xuquuqaha ka-hortagga ee kala duwan:
o Fasalka A ee Qoraallada La beddeli karo waxaa la siin doonaa deyn bixiyayaasha guud ee aan la hubin ee waalidka LATAM ee dejinta (dación en pago) ee sheegashooyinkooda la oggol yahay ee hoos yimaada Qorshaha;
o Qoraallada la beddeli karo ee fasalka B waa la is-diiwaangelin doonaa oo iibsan doonaa saamilayda kor ku xusan; iyo
o Qoraallada la bedeli karo Heerka C waxa la siin doonaa qaar ka mid ah deyn bixiyayaasha guud ee aan la hubin si loogu beddelo isku darka lacag cusub LATAM iyo xallinta sheegashooyinkooda, iyadoo ay ku xiran tahay xaddidaadyo iyo dib u dhacyo gaar ah oo ay sameynayaan dhinacyada dib-u-joojinta.
Qoraalada la bedeli karo ee ka tirsan fasalada B iyo C waxa la bixinayaa, gabi ahaan ama qayb ahaan, iyadoo la tixgalinayo tabarucaad cusub oo lacag ah oo dhan ku dhawaad ​​$4.64 bilyan oo ay si buuxda dib ugu celiyeen dhinacyada RSA, iyadoo ay ku xidhan tahay inay helaan dib u celinta saamilayda ansixinta shirkadda;
• LATAM waxay ururin doontaa $500 milyan oo tas-hiilaad amaah cusub ah iyo ku dhawaad ​​$2.25 bilyan guud ahaan maalgelinta deynta cusub ee lacagta, oo ka kooban amaah xilli cusub ama curaarta cusub; iyo
Kooxda ayaa sidoo kale adeegsatay oo doonaysay inay isticmaasho habka Cutubka 11 si ay dib ugu maalgeliyaan ama wax uga beddelaan heshiisyada kooxda ee pre-codsiga, tas-hiilaadka amaahda, iyo xarunta matoorka dheeraadka ah.
Dhageysiga ansixinta ku filnaanshiyaha Cutubka 11-aad ee Bayaanka Shaacinta iyo ansixinta hababka codeynta ayaa la filayaa in la qabto Janaayo 2022, iyada oo waqti gaar ah ay ku xiran tahay jadwalka Maxkamadda. Haddii Bayaanka Shaacinta la oggolaado, kooxdu waxay billaabi doontaa codsi inta lagu guda jiro ay oggolaansho ka raadin doonto deymaha. LATAM waxa ay codsanaysaa dhageysiga si loo xaqiijiyo in Qorshaha la qabanayo Maarso 2022.
Wixii macluumaad dheeraad ah, LATAM waxa ay samaysay shabakad gaar ah: www.LATAMreorganizacion.com, halkaas oo ay daneeyayaasha ka heli karaan macluumaad muhiim ah oo dheeraad ah oo ku saabsan ogeysiiskan. Kooxdu waxa kale oo ay samaysteen khadka telefoonka ee Cutubka 11aad ee weydiimaha la xidhiidha, kaas oo laga heli karo:
• (929) 955-3449 ama (877) 606-3609 (US iyo Canada)
Waxa kale oo ay leedahay iimaylo gaar ah oo loogu talagalay weydiimaha la xidhiidha dib-u-habaynta ee [emailka waa la ilaaliyay]
LATAM waxa kula taliya habkan Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP iyo Claro & Cia. lataliye sharci ahaan, FTI Consulting sida lataliye maaliyadeed, iyo PJT Partners oo ah bangi maalgashi.
Kooxda Waalidka Ad Hoc, oo ay hogaaminayaan Sixth Street, Shuraakada Qiimaha Istaraatiijiga ah, iyo Sculptor Capital, waxaa la taliya Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, Bofill Escobar Silva, iyo Coeymans, Edwards, Poblete & Dittborn sida lataliye sharci iyo Evercore sida maalgashi bangiga.
Saamileyda kor ku xusan waxay ka kooban yihiin (a) Delta Air Lines, Inc., oo ay la taliyaan Davis Polk & Wardwell LLP, Barros & Errázuriz Abogados, iyo Perella Weinberg Partners LP oo ah lataliye sharci iyo bangi maalgashi, (b) Kooxda Cueto iyo Eblen Kooxda,2 oo ay kula taliyaan Wachtell, Lipton, Rosen & Katz iyo Cuatrecasas oo ah lataliye sharci, iyo (c) Qatar Airways Investment (UK) Ltd., oo ay kula taliyaan Alston & Bird LLP, Carey Abrogados, iyo HSBC oo ah lataliye sharci iyo bangi maalgashi . Qaar ka mid ah saamilaydan ayaa waxaa lagula taliyaa awoodooda shaqsiyeed Greenhill & Co., LLC iyo ASSET Chile, SA sidii lataliyeyaal dhaqaale wadaag ah.
Daniel Pimental wuxuu leeyahay,
Diisambar 2, 2021 at 05:23
U sahamin xalalka edbinta badan ee aanu u hayno caqabadahaaga adag iyo fursadahaaga. In kasta oo gobollo gaar ah oo Maraykanku leeyahay sharciyo maamula xidhiidhka ka dhexeeya dayn-bixiyayaasha iyo dayn-bixiyeyaashooda, sharciga caymisku.